အဆိုပါဖွင့်လှစ် PPTX ဖိုင်ကို: လူကြိုက်များနည်းလမ်းများ - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
အဆိုပါဖွင့်လှစ် PPTX ဖိုင်တွေ
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးတောက်ပ, မျက်စိ-ဖမ်းဒီဇိုင်း, စနစ်တကျစာသား, ပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ animations တွေကို, အသံနှင့်ဗီဒီယိုပေါင်းစပ်အသစ်မာလ်တီမီဒီယာကို formats ၏ဖန်တီးမှုလိုအပ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ဒီပြဿနာတွေကို PPT ၏ပုံစံအားဖြင့်ဖြေရှင်းပြီ။ သူ့ကိုကိုအစားထိုးပေးဖို့က MS 2007 ခုနှစ်ထုတ်ဝေပြီးနောက်နေဆဲတင်ပြချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်အရာထက်ပိုအလုပ်လုပ်တဲ့ PPTX, ရောက်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်သင်တို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက် PPTX ဖိုင်တွေဖွင့်, သငျသညျကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
PPTX Viewer ကို 2.0
ခေတ်မီတင်ပြချက်များကိုဦးတည်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း 1984 ခုနှစ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သုံးနှစ်အနောက်ပိုင်းတွင်အဖြူအနက်ရောင်-and interface ကိုနှင့်အတူ Apple ကပါ Macintosh များအတွက် PowerPoint 1.0 ဆော့ဖ်ဝဲကိုရောက်လာတယ်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်, ထိုအစီအစဉ်ကိုမှအခွင့်အရေးကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကဝယ်ယူခဲ့ကြနှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်များအလွန်ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်သော်လည်း 1990 ခုနှစ်တွင်, အခြေခံရုံး suite ကိုတစ်ဦးအသစ်အဆန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အတော်ကြာအဆက်ဆက်တိုးတက်မှုပြီးနောက် 2007 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အထိုကဲ့သို့သော features တွေရှိပါတယ်ရာ PPTX format ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်:
ပြန်ကြားရေးကစာသားနှင့် / သို့မဟုတ်မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်တွေဆံ့နိုင်ပါတယ်အသီးအသီးသောအစာမျက်နှာများ, ဆလိုက်, အစုတခုအဖြစ်တင်ဆက်လျက်ရှိ၏
ဂရပ်များနှင့်သိကောင်းစရာများကိုအခြားအရာဝတ္ထုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် applications များ embedded အစွမ်းထက်ပုံစံချပေး algorithms ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်စာသားကိုလုပ်ကွက်များနှင့်ရုပ်ပုံများသည် ဖြစ်. ,
ဘုံစတိုင်တို့ကပူးပေါင်းအားလုံးဆလိုက်, တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်း sequence ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်မှတ်စုစေခြင်းငှါရှိသည် ဖြစ်. ,
ဒါဟာဆလိုက်အသွင်ကူးပြောင်းမှုလှုပ်ရှားဖို့ဖြစ်နိုင်, တိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုချင်းစီဆလိုက်သို့မဟုတ်ယင်း၏တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင် ထား. ,
တည်းဖြတ်ရေး interface နဲ့စာရွက်စာတမ်းကြည့်ရှုသူပိုမိုအဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ကွဲကွာနေကြသည်။
PPTX format နဲ့ presentation ကျယ်ပြန့်ကျောင်းများ, စီးပွားရေးအစည်းအဝေးများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ဘယ်မှာအရေးကြီးသောမြင်သာခြင်းနှင့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုမဆိုအခြားအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါတင်ပြချက်များ၏အကူအညီဖြင့်အကျဉ်းချုပ်နှင့်သိကောင်းစရာများ rasskazt ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနိုင်ပါတယ်
အဖြစ်မကြာမီဖိုင်ပုံစံမဆိုလုံလောကျပေါ်ပြူလာဖြစ်လာကဲ့သို့သူ့ကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သောအစီအစဉ်များနှင့် applications များများစွာရှိပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနား interfaces နှင့်စွမ်းရည်များရှိသည်, ထို့ကြောင့်လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်စေ။
တင်ပြချက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်ကို PowerPoint နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်ဖန်တီးရန်ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် display ကိုဖိုင်များ, ဒါပေမယ့် paid သည်, အစာရှောင်ခြင်းအလုပျအတှကျကို PC ဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခုအတော်လေးမြင့်မားတဲ့အာဏာကိုလိုအပ်သည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ PowerPoint, သင်စိတ်ဝင်စားဖို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူလှပသောတင်ဆက်မှုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
အချို့လျှော့ချလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူ PowerPoint ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းကတီထွင်ကို Android operating system ကိုအပေါ်မိုဘိုင်းဖုန်းများအသုံးပြုသူများအတွက်။
မူလကအားလုံးလူကြိုက်များပလက်ဖောင်းယခုရရှိနိုင်သည့် Linux ကို operating system ကိုများအတွက်တီထွင် OpenOffice software ကိုအထုပ်။ အဓိကအားသာချက် - အစီအစဉ်များအခမဲ့စောင်ရေ, လုံးဝအခမဲ့ကြောင်း, တစ်ဦးလိုင်စင်နှင့် activation key ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ presentation ဖန်တီးဖို့ OpenOffice Impress သည်သူ PPT နှင့် PPTX ပုံစံများအပါအဝင်အခြားအစီအစဉ်များအတွက် created တင်ပြချက်များကိုတည်းဖြတ်ရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို PowerPoint နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်အထင်ကြီး။ အသုံးပြုသူများသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတင်းပလိတ်များ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကမှတ်ချက်ချ, ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်း၏ပျောက်ဆုံးနေ element တွေကိုအမြဲတမ်းကို web ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အစီအစဉ်ကိုသူတို့က Adobe Flash-Player ကိုပေးသောအပေါ်မည်သည့်ကွန်ပျူတာဆော့ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတာက SWF Format ကိုမှတင်ပြချက်များပြောင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
Impress OpenOffice software ကိုအထုပ်နှင့်တကွကြွလာ
အဟောင်းနှင့်အနှေး PC များ၏ပိုင်ရှင်များအတွက်စုံလင်သောဖြေရှင်းချက်တရားဝင် site မှအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည့် PPTX Viewer ကို 2.0 program ပါလိမ့်မယ်။ installation ဖိုင်လျှောက်လွှာ interface ကိုရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသည်သာ 11 MB အထိအလေးချိန်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင့်သူတို့ကိုတည်းဖြတ်အတွက်အသုံးပြုမရနိုငျဆိုလိုသည်မှာ PPTX Viewer ကို 2.0 တင်ပြချက်များကြည့်ရှုဘို့သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူ, စာရွက်စာတမ်းစကေးမြင်ကွင်းကို setting များကိုပြောင်းလဲပုံနှိပ်သို့မဟုတ် e-mail, ကနေတဆင့်ပေးပို့ဖို့တင်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတရားဝင် website တွင်အခမဲ့ download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်
ဒီ app ကတော့လစာအထုပ်ကို WPS Office ကိုအစီအစဉ်များကို 10 ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုကြီးစွာသော functionality နဲ့တောက်ပ, ရောင်စုံပုံစံများအမျိုးမျိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှအစီအစဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ် WPS ရုံး, အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြတင်းပေါက်၏ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်စွမ်းပိုမိုမြန်ဆန်နှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖန်တီးကြည့်ရှုရန် tools တွေကိုအစုတခုရှိပါတယ်
အားလုံးလူကြိုက်များတဲ့မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း WPS ရုံး၏မူကွဲရှိပါတယ်။ အခမဲ့ mode မှာသင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကြေးအဘို့, အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကို PPTX နှင့်အခြားဖိုင်များကိုကြည့်ရှုတည်းဖြတ်နိုင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် tools များပါဝင်သည်။
နောက်ထပ် functions တွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်မည်ဟု Kingsoft တင်ပြ၏ stripped-down version ကို, တင်ပြချက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘို့ tools များ၏အခြေခံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရုံး suite ကိုနောက်ထပ်လျှောက်လွှာ။ ရှုပ်ထွေးသောကာတွန်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, အထက် 4K နှင့်တစ်ဦး resolution နဲ့ display ကိုထောက်ပံ့ - ဤအချိန်, သူ့ရဲ့ "chip ကို" တစ်ခုအဆင့်မြင့်မာလ်တီမီဒီယာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအတန်ငယ်ခေတ်မမီတော့ဒီဇိုင်း toolbar ကိုနေသော်လည်းအဆင်ပြေကြောင့်သုံးပါ။ စစ်ဆင်ရေးမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေတွင် menus တွေအကြားအကူးအပြောင်းဖို့ရှိသည်ပါဘူးစဉ်အတွင်းဒီတော့အားလုံးအရေးကြီးသော icon များ, တဦးတည်း tab မှာအုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။
စွမ်းရည်ရုံးတင်ပြသငျသညျရှုပ်ထွေး animations တွေကိုနှင့်အတူတင်ဆက်လုပ်ခွင့်ပြု
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်နေရာတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းပျော့သောမိုဃ်းတိမ်နည်းပညာများခြင်း, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိုလှောင်မှုလှညျ့ စား. နိုငျပါ။ အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်နှင့်များစွာသောအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုလည်ပတ်နိုင်သည့် PPTX format နဲ့တင်ပြချက်များ။
သူတို့ထဲကလူကြိုက်အများဆုံးမိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှ PowerPoint အွန်လိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Service ကိုအများကြီးပြီးခဲ့သည့်အစီအစဉ်ကိုစာရေးကိရိယာစည်းဝေးပွဲကိုကိစ္စများကဲ့သို့ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ တင်ပြချက်များသင့်လျော်သောအကောင့်များဖန်တီးရေးပြီးနောက် PC ပေါ်မှာမိုဃ်းတိမ် OneDrive အတွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ထားပါ။
အနီးဆုံးပြိုင်ဘက် - န်ဆောင်မှုကို Google တင်ဆက်, tool များ၏ Google Docs အွန်လိုင်း suite ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ရိုးရှင်းနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း - ဆိုက်၏အဓိကအားသာချက်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမအကောင့်များနှင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
Adobe ကစာရင်းစစ်ဘို့အသုံးဝင်သော plugins ကို
ဆိုက်ပိတ်ဆို့လျှင်, အတန်းဖော်အတွက် Log
ITunes ကိုဒေါင်း firmware ကိုသိုလှောင်ဘယ်မှာ
အဆိုပါ PC မှာအလုပ်အရှိန်မြှင့်ဖို့ 14 မှာ Windows ပူသော့
အခြားမည်သည့်အပေါ်နောက်ဆက်တွဲအစားထိုးဘို့ရိုက်ကူးသည့်အခါအစိမ်းရောင်နောက်ခံသို့မဟုတ် "hromakey" ကိုအသုံးပြုသည်။ Hromakey, ဥပမာ, အခြားအရောင်အပြာဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အစိမ်းရောင်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အစိမ်းရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်ရိုက်ကူးတဲ့ Pre-ပဋိသန္ဓေ ယူ. ဇာတ်ညွှန်းသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုပြီးနောက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသင်ခန်းစာတွင်, ငါတို့ Photoshop မှာပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အစိမ်းရောင်နောက်ခံကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နှင့် iCloud မှ IPhone ကို backup လုပ်ထားမိတ္တူ
Yandex Browser ကိုအတွက်ကြော်ငြာ blocker ကို Disable